TeamViewer 13 ikozvino ine 64-bit rutsigiro rweLinux | Linux Vakapindwa muropa
TeamViewer 13 ikozvino ine 64-bit rutsigiro rweLinux
Nguva ino iyo TeamViewer yekuvandudza timu yakaburitsa yayo yekutarisa vhezheni mazuva mashoma apfuura uko nhau huru ndeyekuti pakupedzisira isa parutivi kushandiswa kwe32-bit kutsamira pane linux, kupa nzira kune makumi matanhatu neshanu vhezheni mushure memakore mazhinji.
Ini pachangu, ndiri kufara chaizvo kubvira gore rino kusiyiwa kwema 32-bit mapurani akaitwa kuzivikanwa munzvimbo dzakasiyana uye zvine musoro kana ichi chivakwa chinongokutadzisa iwe kuti usaziva anopfuura 4GB ye RAM, apo parizvino matimu mazhinji anotsigira zvimwe zvacho.
Asi kuenderera kumusoro wenyaya wanhasi iyi vhezheni ye TeamViewer yakavakirwa chose paQT saka mutengi akatozvarwa kuLinux uye isu tinomira kuvimba nekushandiswa kweWini kwayo.
La TeamViewer yekutarisa inosanganisira zvese maficha anga atovepo pamushanyi: chidhiraivho chiri kure, kufambisa faira, pamwe nezvimwe zvinoverengeka zvatinoziva kare.
Zvakare cIsu tinokwanisa kugovera iyo iOS skrini nerutsigiro rwekure, pamwe neiyo chitupa uye manejimendi manejimendi, kune rimwe divi iyo kumanikidzwa kurekodha zvikamu nekudaro uchipa poindi inotsigira kuchengetedzeka, kune rimwe divi, zvinouyawo ne Hardware yakawedzera chiyero Nayo iyo inotibatsira kudzikisa masisitimu mutoro kune hukuru hukuru, iko kusimudzira mukutamisa mafaira hakuregererwe kana.
Uye zvakare, iyi vhezheni yekutanga inosanganisira iyo rondedzero ye Makomputa uye kutaurirana, kubvumira kukurumidza kuwana kumaseva ako, remote control kuburitsa.
Kune rimwe divi muWayland, parizvino Solo Inotsigirwa inobuda iri kure kudzora uye faira kuchinjisa kutanga, saka kana iri kure inosvika ichidikanwa, unofanirwa kupinda ne Xorg .
Kunyangwe izvi zvichishungurudza, hazvisi zvekuti timu yekusimudzira haidi kupa rutsigiro asi imhaka yekuti Wayland nkana kupa chimiro chekuita kure kure (skrini, mbeva uye kuteedzera kwekhibhodi), saka ichiri kuda zvakakwana kukwizisa.
Kunyangwe iwe ungafunge kuti TeamViewer timu inofanirwa kuitarisira, izvi hazvina kunaka kubvira ipapo ivo vanofanirwa kuita zvakafanana kune yega nharaunda nharaunda inotora rimwe basa.
Pasina imwezve ado, iyi nhau nyowani chinhu chinonyanya kufadza kune vazhinji, kana iwe uchida kuiisa, unofanirwa kutevedzera anotevera matanho.
Iyi vhezheni inogona kuwanikwa mumapakeji ako DEB, mune zvinyorwa RPM uye zvakare mune rake code sosi yekuunganidza.
1 Isa TeamViewer 13 pane Debian / Ubuntu uye zvigadzirwa.
2 Isa TeamViewer 13 pane Fedora / Centos uye zvigadzirwa.
3 Isa TeamViewer 13 pane Arch Linux uye zvigadzirwa.
Isa TeamViewer 13 pane Debian / Ubuntu uye zvigadzirwa.
Kuti tiite izvi tinofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo peji uye muchikamu chekurodha sarudza yedu package Ini ndinosiya iyi link pano.
Izvozvi kurodha pasi kwaitwa, isu tinofanirwa kuvhura chinongedzo uye tozvimisa isu mune dhairekitori iro dhagi repakeji rakatorwa.
Mune yangu nyaya yaive muDownloads dhairekitori:
Iye zvino tinoenderera mberi nekuisa iko kunyorera ne:
Chekupedzisira, isu tinongofanirwa kumirira kuti ipedze kuti tikwanise kumhanyisa iyi vhezheni itsva pakombuta yedu.
Isa TeamViewer 13 pane Fedora / Centos uye zvigadzirwa.
Kune rimwe divi, nezvenyaya yekugoverwa uku, nenzira imwecheteyo yatinofanira dhawunirodha pasuru iyo isu kupa kubva pawebhusaiti yavo uye nekuiisa nemirairo inotevera:
Isa TeamViewer 13 pane Arch Linux uye zvigadzirwa.
Padivi reArch Linux uye zvigadzirwa zvayo, izvi zvinogadzirwa kubva kunyorera kuburikidza nezvakachengetedzwa zvine madhiri mapakeji, parizvino haisati yavapo asi ini handina chokwadi kuti mumazuva mashoma ichave yakagadzirira, isu tinongofanirwa kutarisa kuwanikwa kuburikidza neAUR.
Iwo wekurayira kuiisa ndeinotevera
Pasina imwezve ado, isu tinongofanirwa kutaura tichitenda kuti ivo vakateerera chikumbiro chevakawanda, kunyangwe chiri chokwadi kuti kunyorera hakusi kuvhura sosi, ichiri chishandiso chakanakisa pakutarisira zvikwata zviri kure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » TeamViewer 13 ikozvino ine 64-bit rutsigiro rweLinux
Alvaro Borrego chigadziri chemufananidzo akadaro
Hi David, unofanirwa kugadzirisa kuraira kwenzvimbo dzeArch uye zvigadzirwa zvinotsamira pacman ... "yaourt -Sy timu ..." zvakare nzira yakanakisa yekuzviita kurodha pasi tarira, kusunungura zip, kupinda munzira yePKGBUILD uye kuuraya "makepkg -s PKGBUILD" saka unochengeta KISS… muchikamu. Kwaziso
Pindura kuna Alvaro Borrego
Iyo vhezheni yeLinux haisati iine bharaki, semuenzaniso haugone kutumira Ctrl-Alt-Del
Isu tinoenda kwandiri pachangu kudzamara vagadzirisa vhezheni isina basa zvachose.
Gaspar Fernandez akadaro
Pakupedzisira! Zvakatora gumi neshanu shanduro kuti ikwanise kusvika kuGNU / Linux natively. Ichokwadi ndechekuti chirongwa chakanakisa cherudzi urwu rwechinhu uye chokwadi chekuwanda kwemapuratifomu chinoita kuti hupenyu huve nyore kwatiri kupa rutsigiro kuvanhu vane Windows kana Mac.inoshanda.
Kana iri Wayland, zvakajairika kuti haina rutsigiro rwezvinhu zvakawanda, haisi TeamViewer chinhu, asi Wayland. Ndinovimba kuti zvishoma nezvishoma timu yekusimudzira ichaisa mabhatiri mune iyo pfungwa, izvo zvinhu zvidiki izvo zvinoita izvo zvisati zvaitika kuWayland izvozvi.
Pindura kuna Gaspar Fernández
Nenzira, iwe wakarasikirwa ne t mu "yaourt" ye arch. :)
Gustavo B. akadaro
Ini ndakaisa tw vhezheni 13, asi kana ndichibatanidza kune pc iri kure, ini handione sarudzo yekufambisa faira.
Pindura Gustavo B.
Amazon Web Service ine simba nyowani maficha anoenderana neLinux